Momba anay - Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd.
Eecycle Tianjin Technology Co., Ltd dia orinasam-teknolojia avo lenta izay misy ny endrika, famokarana, varotra ary serivisy bisikileta sy bisikileta. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny distrikan'i Dongli any Tianjin, eo akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Tianjin Binhai, ary 30km miala ny gara Tianjin sy ny seranan-tsambon'i Tianjin, no afaka manampy anao hanavotra ny entana ao an-toerana.
Manana haitao 12 misy patanty eto an-toerana sy iraisam-pirenena momba ny bisikileta sy bisikileta elektrika (ao anatin'izany ny patanty fisehoana, patanty modely sy patantin'ny famoronana sns) Nanamboatra modely 13 izahay arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Indrindra ny batterie miafina novolavolainay, ny bisikileta misy herinaratra tri-folding dia vokatra voalohany eto an-toerana sy iraisam-pirenena ary vokatra miavaka eto amin'izao tontolo izao.
Ny orinasanay dia miorina amin'ny taona 2008, nanolo-tena hanome mpanjifa anatiny sy vahiny vokatra tsara sy serivisy kilasy voalohany izahay. Izahay dia mamokatra sy manodina bisikileta an-tendrombohitra sy bisikileta E-bisikileta, bisikileta an-tanàna & bisikileta foana, bisikileta miorina amoron-dranomasina, bisikileta cruiser amoron-tsiraka, bisikileta ankizy, bisikileta mametaka & bisikileta E-bisikileta ary bisikileta sns. Manana traikefa 10 taona mahery izahay amin'ny fanaovana bisikileta OEM & ODM ho an'ny mpanjifa vahiny. Ny orinasan-tsika dia manana atrikasa misy azy manokana, atrikasa fanaovana hosodoko ary atambatra atrikasa, manarona faritra 8000 metatra toradroa izy ary misy mpiasa 200 mahery.
Chongqing ZhenYouJin Technology Co., Ltd, mpanamboatra matihanina amin'ny ebike miaraka amina motera afovoany sy ny rafitra fametahana afovoany feno, dia mivarotra ny vokatra marika AQL any Eropa, Sina, Etazonia ary Amerika atsimo. Hatramin'ny niorenan'ny fototra dia noraisinay ho kalitao ny kalitao sy ny serivisy. Misaotra ny traikefa lehibe ananantsika sy ny ekipan'ny fampandrosoana misy injeniera 20 mahery avy amin'ny orinasanay manokana sy ireo mpamatsy anay izay manana fifandraisana fiaraha-miasa mihidy maharitra.
Noho izany, afaka mamokatra bisikileta elektrika mihoatra ny 150,000 sy ny rafi-pandeha afovoany manana kalitao avo lenta isan-taona izahay. Amin'izao fotoana izao, ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra manara-penitra iraisam-pirenena. Hiankina amin'ny teknolojia, vokatra, talenta ary tombony amin'ny serivisy izahay hahazoana antoka fa afa-po tanteraka ny mpanjifa.
※ Izahay dia mpivarotra amin'ny Chongqing ZhenYouJin Technology Co., Ltd.
Nandritra ny taona maro nivoarana, ny volan'ny fanondranana isan-taona dia nahatratra 30 tapitrisa dolara amerikana ary ireo mpiara-miombon'antoka aminay manerana an'i Japon, Korea atsimo, Indonezia ary ireo firenena atsinanana atsinanana hafa, Eropa, Amerika atsimo, Etazonia, Suisse, Moyen Orient ary faritra hafa.
Ny bisikiletanay telo sosona dia atokisan'ny mpampiasa anatiny sy vahiny. vokatra vaovao mipoitra ao anaty rano tsy misy farany. Mba hiarovana ny zon'ny fananana ara-tsaina dia hanome vokatra mahafinaritra kokoa ho an'ny mpanjifa mila fanampiana izahay.
Manantena ny fananganana fifandraisana maharitra sy fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay mifototra amin'ny fifampitokisana sy ny tombontsoa azo avy. Miarahaba anao am-pahatsorana any amin'ny orinasa misy anay izahay!